Degso DotVPN loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (2.00 MB)
DotVPN wuxuu ka mid yahay kordhinta aadka loo doorbiday VPN ee adeegsadayaasha Google Chrome. Kuu ogolaanaya inaan ka soo galno 12 dal oo adduunka ah, VPN wuxuu naga ilaaliyaa dhammaan noocyada xayeysiinta ee wax u dhimaya asturnaanta qadka tooska ah, oo ay ku jiraan pop-up-ka iyo boorarka muuqda ee bogagga internetka. Labadiinuba si aad u yar ayaad ku bixisaan xirmadaada internetka oo si dhakhso leh ayaad u baaraandegaan.
VPN, kaas oo bixiya amniga (sirta oo leh 4096-bit key) iyadoo laga saarayo xuduudaha iyada oo la adeegsanayo darbigeeda daruur ku saleysan, kaliya ma kuu ogolaaneeyso inaad hesho adeegyada gobolka ee aan la geli karin; Waxay sidoo kale ka saareysaa xadka xawaaraha. Waa inaan la iska indhatirin in adeegga VPN, oo sidoo kale bixiya marin u helka websaydhada .onion mahadsanid TOR, waxay bixisaa baaxad ballaadhan waxayna u oggolaaneysaa beddelka adeegga aan xadidnayn (si otomaatig ah ugu xirnaanta adeegaha ugu mashquulsan meesha la xushay)
Difaaca darbiga ku saleysan daruuriga
Baadhitaan deg deg ah (Premium)
12 goobood (Premium)
Qarsoodi ah furaha 4096-bit (Premium)
Xayeysiinta aan xayeysiinta lahayn (Premium)
Helitaanka adeegayaasha caymiska
Cabirka Faylka: 2.00 MB
Horumar: Smart Security Ltd.